မျိုးကြီးရဲ့သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ထိခိုက်မပြောသင့်ဘူးလို့ တွေးမိကြောင်းပြောလာတဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ - Cele Connections
မျိုးကြီးရဲ့သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ထိခိုက်မပြောသင့်ဘူးလို့ တွေးမိကြောင်းပြောလာတဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် မျိုးကြီး Covid -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက ပရိသတ်တွေကိုသာမက အနုပညာလောကကိုပါ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးကြီးက ဘာသာရေးပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရောဂါကူးစက်သွားတာမို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ပြောဆိုနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာကလည်း မျိုးကြီးရဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို နားထောင်ပြီး သူမစိတ်ထဲဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောထားပါတယ်။
“ဒီသီချင်းလေး ခုမှနားထောင်မိပြီး အရမ်းကြိုက်တာပဲ။ Covid -19 ဖြစ်တာ ရှက်စရာလဲမဟုတ်၊ အပြစ်ပြောစရာလဲမရှိပါဘူး။ တစ်နေ့ ကိုယ်ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လား ? ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ထိခိုက်မပြောသင့်သလို ကပ်ဘေးကြီးသင့်နေတာမို့ ကုသိုလ်စိတ်လေးထားပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖေးမစကားတွေပြောသင့်တယ်ထင်တာပါပဲ။ ဘယ်သူကတော့ ဖြစ်ချင်မှာလဲနော်။ လူစုလူဝေးနေရာတွေကို မသွားပါနဲ့ ။ အိမ်ထဲနေကြပါ။ ဘယ်အရာမှအကြာကြီးဖြစ်မနေပါဘူး ❤️” ဆိုပြီး အားပေးစကားလေး ပြောထားပါတယ်။
စိုးမြတ်နန္ဒာပြောသလိုပဲ Covid -19 ရောဂါကို ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက် ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ လူစုလူဝေးရှောင်ရှားပြီး အိမ်မှာပဲနေခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်ကိုရော၊ မိမိချစ်တဲ့သူတွေကိုရော ကူညီနိုင်ကြပါစေနော်။
မြိုးကွီးရဲ့သီခငျြးလေးနားထောငျပွီး ဘာသာရေးနဲ့ပတျသတျပွီး ထိခိုကျမပွောသငျ့ဘူးလို့ တှေးမိကွောငျးပွောလာတဲ့ စိုးမွတျနန်ဒာ
နိုငျငံကြျော အဆိုတျော မြိုးကွီး Covid -19 ရောဂါကူးစကျခံရတယျဆိုတဲ့ သတငျးက ပရိသတျတှကေိုသာမက အနုပညာလောကကိုပါ လှုပျလှုပျရှားရှားဖွဈသှားစတော ဖွဈပါတယျ။ မြိုးကွီးက ဘာသာရေးပှဲအခမျးအနားတဈခုကို တကျရောကျခဲ့ပွီး ရောဂါကူးစကျသှားတာမို့ ပွညျသူတှအေနနေဲ့ ဝဖေနျမှုတှေ ပွောဆိုနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ စိုးမွတျနန်ဒာကလညျး မြိုးကွီးရဲ့သီခငျြးတဈပုဒျကို နားထောငျပွီး သူမစိတျထဲဖွဈပျေါလာတာတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောထားပါတယျ။
“ဒီသီခငျြးလေး ခုမှနားထောငျမိပွီး အရမျးကွိုကျတာပဲ။ Covid -19 ဖွဈတာ ရှကျစရာလဲမဟုတျ၊ အပွဈပွောစရာလဲမရှိပါဘူး။ တဈနေ့ ကိုယျရော မဖွဈနိုငျဘူးတဲ့လား ? ဒီလိုအခြိနျတှမှော ဘာသာရေးနဲ့ပတျသတျပွီး ထိခိုကျမပွောသငျ့သလို ကပျဘေးကွီးသငျ့နတောမို့ ကုသိုလျစိတျလေးထားပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဖေးမစကားတှပွေောသငျ့တယျထငျတာပါပဲ။ ဘယျသူကတော့ ဖွဈခငျြမှာလဲနျော။ လူစုလူဝေးနရောတှကေို မသှားပါနဲ့ ။ အိမျထဲနကွေပါ။ ဘယျအရာမှအကွာကွီးဖွဈမနပေါဘူး ❤️” ဆိုပွီး အားပေးစကားလေး ပွောထားပါတယျ။
စိုမွတျနန်ဒာပွောသလိုပဲ Covid -19 ရောဂါကို ဘယျသူမှမဖွဈခငျြတဲ့အတှကျ ပရိသတျကွီးအနနေဲ့ လူစုလူဝေးရှောငျရှားပွီး အိမျမှာပဲနခွေငျးအားဖွငျ့ မိမိကိုယျတိုငျကိုရော၊ မိမိခဈြတဲ့သူတှကေိုရော ကူညီနိုငျကွပါစနေျော။
“ရုပျရှငျနှဈ(၁၀၀)ပွညျ့ပှဲလေးမှာ သူမဟာအနုပညာရှငျအဖွဈသတျမှတျခွငျးခံရလို့ ပြျောရှငျမိတယျဆိုတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ”
ငယ်စဉ်ကတည်းက ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ မင်းသမီးလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း
တစ်နှစ်တစ်ခါ အချိန်မှန်မှန်မပွင့်ပေမယ့် ပိတောက်ပန်းလေးတွေကို အရမ်းမြတ်နိုးကြောင်းပြောလာတဲ့ အိချောပို
“နားထောင်သူတိုင်း ခံစားချက်တွေ ရင်ထဲပြည့်သွားစေမယ့် ပန်းရောင်ခြယ်ပြန်လည် သီဆိုထားတဲ့ ချစ်တိုင်းလည်းမညား သီချင်းဗီဒီယိုဖိုင်”